Cashier / Senior Cashier For Mandalay | Yoma Bank
Cashier / Senior Cashier For Mandalay
ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ၊ Customer အသုံးပြုလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအားသက်ဆိုင်ရာအသီးသီးသို့ ချိတ်ဆက်ပေး၍ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
Customer များအားလွယ်ကူချောမွေ့သောဘဏ်အတွေ့အကြုံပေးနိုင်ရန်အတွက် ငွေသွင်းငွေထုတ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် Customer များ၏လိုအပ်ချက်များကိုသိရှိပြီး ၊လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် Customer Service Standards များကိုတိုက်ရိုက်အသုံးချခြင်းဖြင့် ဘဏ်ခွဲ၏ Sales referral product target များရရှိရန် ထောက်ပံ့ပေးသွားရန်၊ Customer များအသုံးပြုလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို မြန်ဆန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် ရှိပြီးသား Customer များကိုထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုရရန်။
-Customer ၏ လိုအပ်ချက်များကိုသိရှိစေရန် သွက်လက်တက်ကြွစွာမေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ (Sale & Service Teller ၊ Sale & Service Officer ၊Account Manager ၊ Branch Manager, etc.) အားချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
Customer ဝန်ဆောင်မှု (၃၀%)
Customer များအသုံးပြုလိုသောဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တွင် စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန် -
-မိမိလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအသီးသီး၏ အချက်အလက်များအားသိရှိနားလည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ မြန်ဆန်စွာချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။
- Customer Service Standardsများအားအသုံးပြု၍ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီးစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသောဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်။
- နှုတ်ဆက်ရန် - ဖြစ်နိုင်လျှင်Customer ၏အမည်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
- Transaction ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး Customer အနေဖြင့် အခြားလိုအပ်ချက်များရှိ ၊ မရှိမေးခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး နှုတ်ဆက်ရာတွင် Customer ၏အမည်ကိုအသုံးပြုခြင်း။
- အဆက်အသွယ်သစ်များရှာဖွေခြင်းနှင့် ရှိပြီးသား Customer များကိုထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။
-လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘဏ်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်။
-တစ်နေ့တာစာရင်းပိတ်ရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
-Customer မကျေနပ်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးရန်၊ follow-up လုပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သေသပ်စွာဖြေရှင်းပေးရန်၊ လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်။
-ငွေကြေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာများကို ကျွမ်းကျင်စွာသိရှိနားလည်ရမည် ဖြစ်ပြီးဆက်လက်၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်နှင့် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
-လုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဘဏ်မှညွှန်ကြားထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
-ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
ဝန်ထမ်းရေးရာ - အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ဆောင်မှု (၁၀%)
-ဘဏ်ခွဲ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိရောက်အကျိုးရှိစေရန်နှင့် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်။
-Customer Service ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များ ၊အဆိုပြုချက်များပေးခြင်းဖြင့် ပံ့ပိုးမှုပေးရန်။
-ဘဏ်ခွဲ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းများတွင် လိုအပ်သလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(က) လူအများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်ရမည်။
(င) အရေးကြီးသော ၊အဓိကဖြစ်သောဘဏ်နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိနားလည်ထားသူဖြစ်ရမည်။
(စ) ငွေသွင်း၊ငွေထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်များအတွက် ငွေကြေးကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သောအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
(ဆ) 40 Kilogram ရှိသောအလေးချိန်အားသယ်မနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဇ) စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်မှုများအားရှောင်ကျဉ်၍ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တာဝန်သိစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဈ)Customer သိရှိလိုသောအချက်များကိုအရေးထားအာရုံစိုက်၍ စဉ်းစားဖြေကြား ပေးနိုင်ရမည်။
(က) အနည်းဆုံး ၁၀တန်းအောင်ရမည်။
(ခ)တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူ (သို့မဟုတ်) LCCI Level II ,III (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေး Diploma တစ်ခုခုရရှိထားသူကို ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။
(ခ) Microsoft Word, Microsoft Excel နှင့် E-mail အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
(ဂ) အချိန် ၁မိနစ်အတွင်း Englishစာလုံးရေအနည်းဆုံး၂၅လုံးရိုက်နှိပ်နိုင်ရမည်။
(က) သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
(က) မြန်မာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်ရမည်။
(ခ) အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံအသင့်အတင့် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Senior Cashier Naing Group Construction Co.,Ltd Billing Executive Fortune International Limited Accountant Light Source Myanmar Company Limited (LSM) Accountant Seezar Soesan Group of Companies Cashier Seezar Soesan Group of Companies Store Accountant 8 Mile Hotel Sr.Accountant Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading ) Senior Accountant Myanmar Information Highway Accountant PLAINSAILING INTERNATIONAL LOGISTICS & TRADING CO Supervisor (Accountant) Oriental Leasing Co.,Ltd. Collection Assistant ZTE Myanmar Company Limited Assistant Accountant Sales Ledger METRO Wholesale Myanmar Ltd